Heeso Soomaali - Wikipedia
Heeso Soomaali () waa qeyb ka mid ah Fanka iyo Suugaanta Soomaalida taasi oo leh noocyo badan. Sida caadiga ah heesaha Soomaalidu waxay ka kooban yihiin ereyo (ereyo heeseed), laxan iyo muusik kuwaasi ooy ku luuqeeyaan (cod) fanaan. Samaynta heesta waxaa ka qeyb qaata tiro badan oo dad ah, kuwaasi oo leh heerar kala duwan.
2 Noocyada Heesaha
2.2 Heesaha Qaaciga Caanka
3 Nooca muusiga casriga ah
Heeso Soomaaligu waa nooc ka mid ah suugaanta dadka Soomaalida ah kuwaasi oo ku baxa luuqada Af-Soomaaliga.
Fanka Soomaalida waxaa ku jira noocyo badan heeso ah kuwaasi waxaa ka mid ah: qaraamiga, qaaciga, hees-howleedka, iyo heeso-gaagaabka. Waxa hubaal ah in qofkasta ku khalkhalayo farqiga qaaci iyo qaraami. Qaacigu waa nooc ka mid ah heesaha kuwaasi oo la qaado ayadoo (fanaanku) fadhiyo, loo garaaco sida badan kaban iyo sacab kali ah, laakiin qaarkood lagu daro durmaan ama narso iyo turunbo. Si taasi ka duwan, qaraamiga Waxaa la garaacaya noocyo badan oo qalabka muusig ah, fanaaniintu way taagan yihiin ciyaarayaan (isruxayaan) ama way fadhiyaan.
Hees-howleedku waa heeso ka mid ah Suugaanta Soomaalida taasi oo inta badan isticmaalaan dadka shaqaynaya ama howl-maalimeed ku jira. Heesani waxay caan ka yihiin deegaanada miyaga ah halkaasi oo xoolo-dhaqata iyo beeralaydu qaadaan heeso kala duwan wakhtiga lagu gudo jiro shaqada xoolaha ama beeraha. Tusaale fiican waxaa ah heesta la isticmaalo marka xoolaha la waraabinayo:
Geelu geel fulay gaadhi maaye haka daba-fulo....
Heestan waxaa la isticmaala marka beeraha lagu qodayo dibiyada:
Bisinkii nin ku bilaabay
Balaayo uma timaado
Marka beertu bislaato
Waa laguu badhi goyn
Taana beerka ku haay....
Guud ahaan, heesahani ma lahan muusig ama qalab la garaacayo; kaliya waa codka qofka ama kooxda qaadaysa oo kali ah.
Nooca muusiga casriga ah
Waayahaan dambe heeso Soomaaliyeed oo casri ah ayaa ka duwan kuwii hore ee caanka ahaa, heesaha dhaqanka ayaa ah kuwo jaceyl ah halka heesaha casriga ah ay soo bandhigaan noocyo kala duwan. Muusiga Soomaaliyeed ee maanta waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo ay ugu horreeyaan raabka, oo dhowr fanaan ay caan ku noqdeen.
Muusiga casriga ah ee Soomaaliya waxaa inta badan loogu yeeraa "jiilka cusub" sababtoo ah fannaaniinta da'da yar.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Heeso_Soomaali&oldid=223772"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Nofeembar 2021, marka ee eheed 22:19.